Doodda Faransiiska ee Sharciyeynta Cannabis iyo Midabtakoorka Daroogada • Daroogada Inc.eu
Xagaagii la soo dhaafay CBDmakhaayadaha ku yaal Faransiiska waxay u eg yihiin boqoshaada dhulka. Thanks to galdaloolada, shirkadaha pop-up waxay iibinayeen saliidaha CBD, cabitaanka xashiishka iyo boomaatada lagu daray cannabidiol. Dawo moodada ah iyo dawada hurdo la’aanta, welwelka iyo waxyaabo kale oo badan, sida ay dad badani qabaan. Si kastaba ha noqotee, dawladda Faransiiska ayaa si dhakhso leh uga jawaabtay oo si rasmi ah u mamnuucday iibinta CBD bartamihii Juun. Makhaayadaha CBD-da ayaa sidaas darteed u lumay sidii barafka qorraxda.
1 Ansixinta tijaabooyinka cannabis
2 Dagaalkii qarsoonaa ee Faransiisku ku qaaday daroogada
3 Taariikhda hashish Faransiis
4 Cunsuriyada Cannabis
Hase yeeshe dadweynaha Faransiiska waxay si kooban u urin jireen isticmaalka cannabidiol. Tani waxay horseedday dhaqdhaqaaq ka socda Faransiiska si loo sharciyeeyo xashiishadda 'la douce France'. Dabayaaqadii Juun, daraasiin dhaqaaleyahanno, dhakhaatiir iyo siyaasiyiin ayaa ku daabacay warqad furan joornaalka caanka ah ee L'Obs, oo ay ku cambaareynayaan 'musalafnimada' mamnuucidda xashiishadda oo ay ka baryayaan qaranka sharciyeynta. Intaa waxaa dheer, waxaa warbixin soo saaray Golaha La-talinta Ra'iisul Wasaaraha Faransiiska oo ku dhaleeceeyay dagaalka daroogada inuu yahay mid fashilmay oo Faransiis ah isla markaana ku baaqaya in loo sharciyeeyo xashiishadda sababo dhaqaale.
Ansixinta tijaabooyinka cannabis
Hay'adda badbaadada daroogada ee Faransiiska ayaa ogolaatay soo saarista tijaabooyinka xashiishadda ee dawada bishii July. Wax u ololeeyayaasha iyo dhakhaatiirta ayaa riixayay tan iyo 2013. Doodda ku saabsan siyaasadda daroogada ee Faransiiska ayaa inteeda badan ka tarjumeysa wada sheekeysi la mid ah oo horseeday in darsin gobol oo Mareykan ah ay sharciyeeyaan oo ay xakameeyaan xashiishadda tan iyo 2014. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira farqi weyn: Faransiiska ayaa iska indhatiray xiriirka ka dhexeeya jinsiyadda, xashiishka iyo xabsiyada badan.
Dagaalkii qarsoonaa ee Faransiisku ku qaaday daroogada
Waxaa jira cadeymo muujinaya in Muslimiinta si aan kala sooc lahayn loo ciqaabay 50kii sano ee la soo dhaafay ee mamnuuca xashiishadda. Qiyaastii shan meelood oo kamid ah maxaabiista Faransiiska ayaa lagu xukumay dambiyada daroogada - boqolkiiba marka loo eego tan Mareykanka, sida ay sheegtay Wasaaradda Cadaaladda ee Faransiiska. Ku dhowaad dhammaan ragga.
Ma jiro burburka tirada dadka ee dadkan, maaddaama ammaanta Faransiiska ee "sinnaanta buuxda" ee muwaadiniinta ay ka dhigtay sharci-darro tan iyo 1978 in la ururiyo tirakoob ku saleysan jinsi, isir ama diin. Laakiin khabiirka cilmiga bulshada ee Farhad Khosrokhavar, oo daraasad ku sameeya nidaamka xabsiyada Faransiiska, ayaa ogaaday in ku dhowaad kala badh 69.000 oo qof oo maanta ku xidhan Faransiiska ay yihiin Muslimiin asalkoodu Carab yahay.
Muslimiintu waxay matalaan kaliya 9% ee 67 milyan ee dadka ku nool Faransiiska.
Marka loo eego daraasad bishii Janaayo 2018 ee uu wakiishay Golaha Qaranka ee Faransiiska, oo ka mid ah 117.421 oo loo qabtay daroogo ku yaal Faransiiska sanadkii 2010, 86% waxay la xiriireen xashiishadda. Isla daraasaddan ayaa lagu soo warramey in tirada dadka sannad kasta loo qabto 'isticmaalka fudud' ee xashiishka ee Faransiiska ay kordheen 2000-laab markii ay ahayd 2015 ilaa 10 intii u dhaxeysay sanadihii 14.501 iyo 139.683.
Isku soo wada duuboo, kuwan iyo xogaha kale waxay soo jeedinayaan in ilaa 1 loo taxaabayo Maxaabiista 6 ee Faransiiska maanta uu noqon karo nin Carab ah oo Muslim ah oo adeegsaday, iibiyay ama heystay cannabis.
Taariikhda hashish Faransiis
Ka dib taariikhda xashiishka ee Faransiiska. Qarnigii 19-qarnigii Faransiiska ahaa wuxuu aaminsanaa in dawadan ay sababtay waalli, qalalaase iyo dambiyada ka dhex jira Muslimiinta Waqooyiga Afrika. Xiriirka ka dhexeeya xashiishka iyo muslimiinta rabshadaha wata wuxuu ku dhexjiray miyir qaran. Oo waxay saameyn ku yeelatay siyaasada dawlada Faransiiska mudo tobanaan sano ah.
Saraakiishii iyo dhakhaatiirtii gumeystaha Faransiiska ee Algeria, oo u arkay isticmaalka xashiishka inay sabab u tahay waallida iyo fal dambiyeed rabshado wata, ayaa buuxiyay cisbitaalada dhimirka ee Algeria iyadoo ay jiraan muslimiin maxalli ah oo la sheegay inay la ildaran yihiin "foil haschischique" - asal ahaan "reefer waalli". Fikirka noocan oo kale ah ayaa sidoo kale gacan ka geystey in la caddeeyo abuurista 1875 ee Code de l'Indigènat, oo ah sharci Faransiis ah oo cunsuriyadda iyo midab kala sooca ka hirgeliyey Waqooyiga Afrika ee Faransiiska iyadoo si rasmi ah loogu magac daray Muslimiinta maaddooyin halkii laga siin lahaa muwaadiniinta.
Faransiiska waxay dejisay qawaaniin sharci oo u gooni ah oo aan sinnayn oo dhiirrigelinaya kala-sooca, qasabka shaqaalaha iyo xaddidaadda xuquuqda madaniga ah ee muslimiinta iyo Afrikaanka kale.
Xiriirinta cambaareynta udhaxeysa muslimiinta, xashiishka iyo dambiyada ayaa sii socday kadib dhamaadka boqortooyadii faransiiska sanadkii 1968. Waxay raacday dadka waqooyiga afrikaanka ah ee u haajiray faransiiska, oo la rumeysan yahay inay u nugul yihiin rabshadaha iyo dambiyada sidaas darteedna ay ku xiran tahay baaritaanka dowlada. , su'aalo, iyo booliis xad-dhaaf ah oo ku sugan Faransiiska. Xidhibaanada Faransiiska ee doonaya inay dambi ka dhigaan xashiishka dabayaaqadii XNUMXs waxay qaateen fikradahaas midab kala sooca ah.
Waxay ku tilmaameen dhibaatada daroogada ee ummada sii kordheysa inay tahay "Aafo shisheeye" oo ay ku faafiyeen ka ganacsada daroogada carabta Xubin ka tirsan Golaha Qaranka Faransiiska ayaa xitaa soo xigtay Sacy, isagoo xusuusinaya sharci-dajiyayaasha kale in xashiishaddu mar uun dhiirrigelisay koox dilaayaal Muslim ah oo loo yaqaan "Hachichins". Dabcan, muuqaalkan sumcad xumada ah maanta ma jiro. Weli, tirada Muslimiinta ee ku xiran dambiyada la xiriira daroogada waxay soo jeedineysaa in midab takoorkan taariikhiga ah ee ka socda Faransiiska uu weli ku sii noolaan doono.
Haddii Faransiisku uu sharciyeyn doono xashiishadda sharciyeed, dhakhaatiir badan, sigaar cabbin, dhaqaaleyahanno iyo shirkado xashiish ayaa soo dhaweyn doona tan. Laakiin waxay noqon kartaa Muslimiinta Faransiiska ee sida ugu badan u faa iiday.
Akhri wax dheeraad ah qz.com (Xigasho, Iyo)
Waxaan kuu rajeyneynaa Ciid wanaagsan oo Kirismas ah oo ay ka buuxaan xashiishad, CBD iyo waxyaabo kale oo wanaagsan - ku raaxee!
Waxaan adiga iyo dhammaan akhristayaashayada maalinlaha ah u rajeyneynaa Ciid Wanaagsan! Si aad ugu raaxaysato ...